ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: နေဝန်းထွက်ရာမြေသို့
စာရေးသူ Unknown အချိန် 9:46 PM
Nge Naing September 30, 2009 at 10:26 PM
အရေးအသား သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လေယာဉ် စီးဖူးတုန်းကလည်း အဲဒီလိုပဲ ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ သွားတဲ့နေရာကို ရောက်တော့ အိတ်တွေကို ဘယ်နေရာမှာ လိုက်ယူရမှန်းမသိလို့ စိတ်ပူလိုက်တာလည်း မပြောနဲ့တော့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အတွေ့အကြုံကို အဲဒီလိုတော့ ပီပြင်အောင် ပြန်ရေးလို့မတတ်ဘူး။ စာရေးသပ်ကောင်းတယ်။ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေ များများရေးပါ။
Waing October 1, 2009 at 2:36 AM
လေယာဉ်စီးခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံပေါ့ ပထမအကြိမ်ဆိုရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရင်လည်း နားထဲမှာ ဘာသံမှ မကြားရတော့ဘူး။ အခုလို အတွေ့အကြုံမျိုးတွေ အများကြီးရေးပြထားတာ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ အားပေးလျက်ပါ
မချစ်ရ October 1, 2009 at 2:43 AM
မြစ်ကျိုးအင်း October 1, 2009 at 5:42 AM
ဆက်ပါအုံးဗျာ အလွဲလေးတွေ ဖတ်ပြီး ပြုံးချင်သေးတယ်
mysterysnow October 1, 2009 at 6:41 AM
အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကို ပုံစံလှလှလေးနဲ့ ရေးပြထားတာ အရမ်းကောင်းတယ်...
Angel Shaper October 1, 2009 at 6:48 AM
ဘကြီးချမ်းရေ....တူမလေး လဲ အဲလိုကြုံခဲ့ဖူးတာ။ ဟိဟိ။။။
ဘကြီးချမ်း ရေးတတ်တော့ ဖတ်လို့ပိုကောင်းတယ်။
အနော် October 1, 2009 at 12:50 PM
အကိုရေ ပထမဆုံးအကြိမ် လေယာဉ်စီးရတဲ့အရသာကတော့ တကယ့်ကို မေ့မရပါပဲ.. တခါဖူးမှ မစီးဖူးတဲ့ လေယာဉ်ပျံကြီးကို စီးပီး တစ်ခါဖူးမှ မရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံဂျားဆိုတာကြီးကို တစ်ယောက်တည်း သွားခဲ့ရတာကို ပြန်အမှတ်ရမိတယ် ဟိဟိ
ပြင်ဦးလွင်မှာ ခြံဝယ်မယ် စိတ်ကူးရင် အနော့်အတွက်ပါ ခြံလေးကြည့်ပေးထားနော်
ပီးတော့ အကိုကျွေးမယ့် ပုရစ်ကြော်ပူပူနွေးနွေးလေးကိုလဲ စိတ်ကူးနဲ့ စားသွားတယ် အရမ်းကြိုက်တယ် ပုရစ်ကတော့ :))
လင်းကြယ်ဖြူ October 1, 2009 at 7:50 PM
လေယာဉ်ပျံ ဆိုတာကြီးမစီးဖူးခင်က စီးဖူးချင်လိုက်တာ..
သိတဲ့ အတိုင်းပဲ ကိုချမ်းရေ..
Unknown October 2, 2009 at 1:53 AM
ရင်ရဲ့ ရိုးရာ October 4, 2009 at 2:20 AM
အဟားအရေးအသားကလည်းကောင်းတယ် ဗဟုသုတကလည်းရတယ် ရယ်လည်းရယ်ရတယ် အဲ့ဒီလိုဇာတ်လမ်းလေးတွေ ဖတ်ချင်းတယ်ဗျား))
အဟားအရေးအသားကလည်းကောင်းတယ် ဗဟုသုတကလည်းရတယ် ရယ်လည်းရယ်ရတယ် အဲ့ဒီလိုဇာတ်လမ်းလေးတွေ ဖတ်ချင်သေးတယ်ဗျား))
ahphyulay October 4, 2009 at 4:50 AM
ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ ရတုံးက ဒတ်(ခ်ျ)လေ
ကြောင်းလိုင်းပေါ်မှာအရက်ပျော့ ပျော့ လေး
ထင်တယ်၊ဝိုင်လို့ ထင်တာပဲ လေယာဉ်မယ်လေး
တော့ ဘူးဗျား..။ဒီပို့ (စ)လေးဖတ်ပြီး အိုးပစ်အိမ်
ပစ်ထွက်ခဲ့ ရတဲ့ ခရီးလေးကိုထပ်တူထပ်မျှပဲပြန်
ကိုလူထွေး October 4, 2009 at 5:31 AM
လေဆိပ်ထဲလဲရောက်ရော လက်မှတ်ကြီးကို မလိုတော့ဘူးဆိုပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ရော...
ဝက်ဝံလေး October 4, 2009 at 5:50 AM
ဟယ်ရို ရေချမ်းရေ လာဖတ်သွားတယ်သိလား ဟိဟိ ဆက်ရေးဦးမယ်ဆို မျှော်နေတယ်နော်သိလား အလည်လာပါတယ် သူက ဆက်ရန်ဆိုတော့ မျှော်ရဦးမှာပေါ့ နော့် ဟိဟိ
ဟဲဟဲ စီဘောက် ပျောက်လို့လိုက်ရှာလိုက်ရတာမောသွားလား ခွီခွီးးးးး
Anonymous October 4, 2009 at 6:13 AM
အင်း... ဘယ်လိုပြောရမလဲ... ဘာမှမပြောတာပဲ ကောင်းပါတယ်ဗျာ...။
စိတ်၏ဖြေရာ October 4, 2009 at 12:57 PM
မိုးစက်အိမ် October 5, 2009 at 10:21 AM
ဟားဟား ကောင်းတယ် အကိုရာ ရှည်ပေမဲ့ ဖတ်လို.ကောင်းတယ် ... ဆက်ရန်လေး မျှော်နေမယ်နော်.
ဟဲဟဲ ... ကျွန်တော်တို.လည်း ကြုံဖူးပါတယ် တောသား
မြို.ရောက်ဆိုပါတော့ အစ်ကိုရာ :)
ကာရံဆူး October 6, 2009 at 2:32 AM
Unknown October 6, 2009 at 4:41 AM
ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။အထက်ကကာရံဆူးမာန့်ခဲ့တာ သူအလိုလိုပျောက်သွားတယ်။မေးလ်ထဲမှာတော့ကျန်ခဲ့တယ်။အခုမေးလ်ထဲကယူပြီးတင်လိုက်တယ်။ဆောရီးနော် ကာရံဆူးရေ။
ကိုချမ်းလင်းနေရေ...စာအရေးအသားကောင်းပါတယ်...ဆုတောင်းလေးအတွက်လည်း ကျေးဇူးပါနော်...ဆက်ရန် မျှော်နေပါတယ်...လင့်ခ်ယူသွားခွင့်ပြုနော်...
desertraindrops October 6, 2009 at 12:24 PM
ကိုချမ်း ခရီးစဉ်အစလေးကိုဖတ်ပြီး ပြုံးသွားတယ်နော့။
SHWE ZIN U November 20, 2009 at 10:09 PM